Cumar al-Bashiir oo joojiyay guddigii wahadalka cunoqabataynta kula jiray Maraykanka - Horn Future
Cumar al-Bashiir oo joojiyay guddigii wahadalka cunoqabataynta kula jiray Maraykanka
Khartoum(Horn Future)-Dalka Sudan ayaa ku dhawaaqday inuu hakiyay wadahadalii uu kula jiray Maraykanka muddo 3 bilood ah,kaas oo ka dambeeya go’aanka Washington ay ku gaadhay in la kordhiyo cunaqabataynta muddo 3 bilood ah kaas oo ay kusoo rogeen Khartoum 20 sanaadadood sano ka hor.
Madaxweynaha Sudan Cumar al-Bashir ayaa oo soo saaray amar madaxtooyo oo lagu hakinayo guddiga wadahalada kula jirta Maraykanka ilaa 12 bisha Oktober ee soo socota.
Go’aankan ayaa waxa laga baahisay wakaaladda wararka rasmiga ah ee dalka Sudan iyada oo aanan laga bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan arrintan.
Waxa dhanka kale tallaabadan Sudan ay ka dambeeyssa kadib markii wassaradda arrimaha dibada ee Maraykanka ay sheegtay in Maraykanka uu dib u dhigay go’aanka ku saabsan in si kamadamabys ah looga qaado cunaqabataynta saaran dalka Sudan.
Waxa la filayay in madaxweynaha imika Donald Trump uu soo saaro go’aan ku saabsan in cunaqabateyntan in si joogta ah loo laalo iyo inkale.
Maamulka Maraykanku war qoraal ah oo uu soo saaray shalay ayaa waxa lagu qiray in Sudan ay sameeysay “hore-umar la taaban karo oo muhiim ah meelo badan,” laakiinse dhanka kale lagu sheegay inay u baahan tahay 3 bilood oo dheeraad ah si loo hubiyo in Sudan si buuxda ay ula dhaqantay cabsida Washington.
Mareykanka ayaa waxa uu sheegay bishii June inuu “si xoog leh” ugu welwelsan yahay waxa uu ku tilmaamay diiwaanka Sudan ee xuquuqda bini’aadanka.
Dhanka kale Sudan ayaa sheegtay Salaasadii inay ka jawaabtay dhamaan codsiyadii Maraykanka si loo qaado cunaqabatayn uu ku soo rogay muddo 20 sanadood ka hor,taas oo noqotay mid ku gudban dhaqaalaha dalka.
Sudan ayaa waxa ay u guclaynaysaa inay dib-u-gasho nidaamka baananka caalamiga ah iyo inay u furto dalka ganacsiga iyo maal-gashiga shisheeye oo si xoog leh ay ugu baahan tahay inay ka caawiso xakamaynta sicir bararka xadhkaha goostay oo gaadhay ku dhawaad 35% iyo sidoo kale yaraanshaha lacagaha shisheeye oo ku gudban awooddeeda inay wax kasoo iibsato dibadda.
Maraykanka ayaa waxa uu hore ugu shaambadeeyay dalka Sudan inay taageerto waxa loogu yeedho argagixisada arrintan oo noqotay hub lagu curyaamiyo dalalka diidan siyaasadaha Maraykanka marka lagu daro in kaligood-taliayaasha dunidu iyo dalal kale ay u adeegsadaan si loogu cabudhiyo dadka diidan siyaasadahooga guracan.
Dhinaca kale cunaqabatayntan Maraykanku ku hayo dalka Sudan mudadda 20 sanaddood ayaa waxa ay saameeyn aad u ba’an ku yeelatay nolosha bulshada caadiga ah,iyada oo waxyeello aad u ba’an u gaysatay waaxaha ay ku tiirsan tahay nolosha aasaasiga ah sida goobaha daryeelka caafimaadka iyo kaabayaasha u ah aasaasiga nolosha dadwaynaha.
« Lawmakers introduce impeachment article against Trump	» Gantaalka ( Shaydaan 2) ee dalka Russia uu damacsan yahay inuu soo saaro dhawaan+video